प्रधानमन्त्रीलाई वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीको पत्र, हामी तपाई रोम जल्दा मुरली बजाउने नीरो हो त भन्दैनौ, तर... | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रधानमन्त्रीलाई वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीको पत्र, हामी तपाई रोम जल्दा मुरली बजाउने नीरो हो त भन्दैनौ, तर...
प्रधानमन्त्रीलाई वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीको पत्र, हामी तपाई रोम जल्दा मुरली बजाउने नीरो हो त भन्दैनौ, तर…
माघ २२ गते, २०७६ - १६:२१
प्रवास, मुख्य समाचार, सन्जाल बहस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चीनको हुबेई प्रान्तमा रहेको वुहानबाट एक नेपाली विद्यार्थीले पत्र लेखेकी छिन् । आफूहरु कोठामा थुनिएर बसेको यतिका दिन वितिसक्दा पनि आफ्नो देशको सरकारले उद्धार नगरेको भन्दै वुहानमा रहेकी प्रमिला देवकोटाले पत्र लेखेकि हुन् ।
उनले सामाजिक संजालमा अपिलसहित पोष्ट गरेको पत्र यस्तो छ ।
त्यो समाचार त पाएनौं तर तपाईहरुले बाजा बजाइरहको तस्वीर भने पायौं। हामी तपाई रोम जल्दा मुरली बजाउने नीरो हो त भन्दैनौ। तपाईका विगतका काम हेर्दा हामीलाई लाग्दैन तपाईको मुटु त्यति कठोर छ। तर तपाईले पक्कै मान्नुपर्छ हामी अत्यासिएका छोराछोरी जस्ताको मनमा अझै आस नदेखाएर तपाईले आफूमा सम्वेदना भने नभएको पुष्टी गर्नुभएको छ।
देशमा स्रोत छैन्, ठीक हो नहुनु आफैमा दोष होइन। तर स्रोत जुटाउन नसक्नु त्यो दोष हो। जनता मगन्ते मात्रै मानिरहने र राज्य भएको महसुस नै नहुने कस्तो देश बनाउनुभयो तपाईहरुले ? हामी यहाँ सोच्दैछौ कुनै दाता तपाइकाहाँ हामीलाई १४ दिन लगिदिने प्रस्ताव लिएर किन आइदिएन ?
त्यो सहरमा हामी अट्ने ठाउँ खोज्न तपाईहरुले चीनले अस्पताल बनाउँने भन्दा बढी समय लगाउनुभयो। तपाईहरुलाई काम गर्न नपर्ने र राज्य चलाउन पाइरहने किन बनायौ हामीले ? त्यो सोचेर पनि आफैलाई चिथोर्न मन लाग्छ।
कुन समय आउँछ नागरिकको जीवनमा जब उसलाई लाग्छ, यस्तो देशमा किन जन्मिए ? हामीलाई पहिलोपटक यस्तै लागेको छ। आस छ, हामी यहाँ सकुशल हुँदै हाम्रा बा जस्तो प्रधानमन्त्रीले बुझेछन् र घर आइयो भन्न पाइयोस् र हाम्रा अर्का रातहरु आसमा अत्यासिएर बाच्न नपरोस्।
हामी वुहानमा अत्यासिएका नेपाली
माघ २२ गते, २०७६ - १६:२१ मा प्रकाशित